Wotwaa twetia wɔ Gilgal (1-9)
Wodii Twam; manna gyaee tɔ (10-12)
Yehowa safohene (13-15)
5 Amorifo+ ahemfo a wɔwɔ Yordan agya wɔ atɔe fam* no nyinaa, ne Kaanan+ ahemfo a wɔtete po ho no nyinaa tee sɛ Yehowa maa Yordan nsu no yowee wɔ Israelfo no anim kosii sɛ wɔn nyinaa twae. Wɔtee ara pɛ na wɔn koma tui,*+ na Israelfo no nti wɔbɔɔ hu paa.*+ 2 Saa bere no, Yehowa ka kyerɛɛ Yosua sɛ: “Fa abo a ano yɛ nnam yɛ asekan na twa Israel mmarima twetia*+ bio, nea ɛto so abien.” 3 Enti Yosua de abo yɛɛ asekan de twaa Israel mmarima no twetia wɔ Gibeat-Haaralot.*+ 4 Nea enti a Yosua twaa wɔn twetia ne sɛ: Ɔman a wofi Egypt bae no mu mmarima nyinaa, mmarima a wobetumi akɔ ɔko* no nyinaa wuwui ɔkwan so wɔ sare no so bere a wofii Egypt no.+ 5 Wɔn a wofi Egypt bae no nyinaa de, na wɔatwa wɔn twetia dedaw. Nanso bere a wofii Egypt no, wɔn a wɔwoo wɔn kwan so wɔ sare so no nyinaa de, na wontwaa wɔn twetia. 6 Israelfo no nantew sare no so mfe 40+ kosii sɛ ɔman no nyinaa, kyerɛ sɛ, mmarima a wobetumi akɔ ɔko a wofi Egypt bae a wɔantie Yehowa no nyinaa ase hyewee.+ Yehowa kaa wɔn ntam sɛ ɔremma wonhu asaase a Yehowa kaa wɔn agyanom ntam sɛ ɔde bɛma yɛn no da,+ asaase a nufusu ne ɛwo abu so wɔ so no.+ 7 Enti ɔmaa wɔn mma besii wɔn anan.+ Eyinom na Yosua twaa wɔn twetia. Ná wontwaa twetia efisɛ wɔantwa wɔn twetia wɔ kwan so. 8 Bere a wotwaa ɔman no nyinaa twetia wiei no, wɔtenaa wɔn asoɛe hɔ kosii sɛ wɔn ho tɔɔ wɔn. 9 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Yosua sɛ: “Ɛnnɛ mapia Egypt animguase nyinaa afi mo so.” Enti wɔtoo hɔ din Gilgal,*+ na wɔfrɛ hɔ saa de besi nnɛ. 10 Israelfo no kɔɔ so tenaa Gilgal, na bosome no da a ɛto so 14 anwummere no, wodii Twam no+ wɔ Yeriko sare no so. 11 Bere a wodii Twam no a ade kyee no, saa da no ara na wofii ase dii asaase no so nnɔbae, paanoo a mmɔkaw* nnim+ ne nkyewe. 12 Na efi da a wodii asaase no so nnɔbae no bi no, mana no gyaee tɔ, na Israelfo annya mana bio.+ Saa afe no, wofii ase dii Kaanan asaase no so nnɔbae no bi.+ 13 Bere a Yosua wɔ Yeriko mpɔtam hɔ baabi no, ɔmaa n’ani so hui sɛ ɔbarima bi+ atwe sekan gyina n’anim.+ Ɛnna Yosua kɔɔ ne nkyɛn kobisaa no sɛ: “Wowɔ yɛn afã anaa yɛn atamfo afã?” 14 Ɔbarima no buae sɛ: “Daabi, mmom maba sɛ Yehowa safohene.”*+ Ɛnna Yosua bɔɔ ne mu ase de n’anim butuw fam bisaa no sɛ: “Asɛm bɛn na me wura wɔ ma n’akoa?” 15 Na Yehowa safohene no ka kyerɛɛ Yosua sɛ: “Yi wo nan ase mpaboa, efisɛ baabi a wugyina no yɛ kronkron.” Ntɛm ara na Yosua yɛɛ saa.+
^ Nt., “baabi a ɛhwɛ po.”
^ Nt., “wɔn koma nanee.”
^ Nt., “ná honhom biara nni wɔn mu bio.”
^ Ɛkyerɛ, “Mmarima Dua Ano Were Bepɔw.”
^ Anaa “mmarima a wɔaso sɛ wɔkɔ sraadi.”
^ Ɛkyerɛ, “Pia; Munum.”
^ Anaa “sahene.”